"रेनो लोगान" के अवकास? विशेषताहरु Renault लोगान
1998 मा, फ्रान्सेली मोटर वाहन समूह Renault सस्ती परिवार-शैली पालकी सिर्जना गर्न नयाँ परियोजना शुरू। समाप्त मोडेल 2004 मा सार्वजनिक गर्न प्रस्तुत गरिएको छ। को पद L90 अन्तर्गत कार को सिरियल उत्पादन गर्ने "Dacia" मा रोमानिया थाले। एक वर्ष पछि, विधानसभा को मास्को Avtoframos बोट को लाइन मा "रेनो लोगान" प्रबन्ध मिलाइयो र 2007 मा, कार मा भेला गर्न थाले संयुक्त उद्यम "महिन्द्रा र Renault" नासिक को भारतीय शहर मा। "विशेषताहरु रेनो लोगान" खातामा उदाहरणका लागि, क्षेत्र सञ्चालन एक मोटर वाहन को peculiarities लिएर निर्धारण थिए, 1 लीटर, 70 HP को ब्राजील गरेको इन्जिन क्षमता स्थापित, तर यो कम octane पेट्रोल र इथेनल मा चल्न सक्छ। कार इन्जिन "रेनो लोगान," रूस गर्न पठाइएको, यूरो3यूरो4र 105 HP को क्षमता संग 1.6 लिटर आफ्नो आवाज, यस्तो इन्जिन लागि इन्धन उच्च octane आवश्यक स्तर पूरा।
कार अर्थव्यवस्था वर्ग
पेरिस 2012 को शरद ऋतु मा मोटर शो त्यहाँ नयाँ "रेनो लोगान" notchback एक प्रस्तुति थियो र hatchback Sandero। अन्तमा, "बहुमुखी" एक शरीर संग संस्करण अप्रिल 2013 मा जेनेभा मा प्रस्तुत गरिएको थियो। यो परियोजना मा, "रेनो लोगान" विकासकर्ताहरूले लगभग 20 लाख यूरो बचत हुनेछ कम्प्युटर डिजाइन भागहरु र घटक-द-कला प्रविधिको नवीनतम विधिहरूमा काम गरे। समुच्चय, शरीर घटक र प्रसारण शक्ति बोट को उत्पादकहरु 5000 यूरो भित्र परियोजना "रेनो लोगान" ल्याउन लागत मा tasked थियो पहिले। कार सुरुमा तेस्रो विश्व देशहरूमा बिक्री र शोषण केन्द्रित थियो। कार को निर्माण मा मार्गदर्शन श्रम को शेयर उच्च रूपमा स्वचालित विधानसभा लाइन अधिक महंगा छ राखे गरिएको छ।
अवकास - मुख्य समस्या एक
मा रूसी सडक अवकास "रेनो लोगान" परिप्रेक्ष्य सवारी युरोपेली संस्करण मात्र 135-140 मिमी हुँदा, 155 मिमी भित्र गणना देखि। तर रूसी खरीदारों कार unanimously कि कम भन्नुभयो खरीद गर्दै हुनुहुन्छ। साँच्चै, रूस मा कार्यका लागि डिजाइन मिसिन को बहुमत, को अवकास 170 मिमी छ, र पनि यो आंकडा सधैं रूसी सडक मा सञ्चालन अवस्था अनुरूप छैन। हालै, रूसी मोटर वाहन बजार एक असत्यवत अवस्था सिर्जना, यात्री कार को उत्पादकहरु गुरुत्वाकर्षण को केन्द्र कम र वाहन स्थिरता सुधार र यस्तो कार मा कठिन सवारी सवारी उचाइ कम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। कारण - खराब सडक, धक्का, गड्ढे, धक्का। को "रेनो लोगान" मा अवकास को कस्तो प्रकारको प्रश्न एकदम सान्दर्भिक छ। ड्राइभर अघि निरन्तर कम अवतरण आफ्नो कार को समस्या सक्ने छ। र हरेक समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक भएकोले यसलाई जरूरी सम्प, तल कोष्ठ शक र सडक अनियमितताहरु अन्य फैलएको भागहरु चेसिस एउटा सानो टांसिनु गर्न जमीन अवकास वृद्धि गर्न तरिकाहरू छ।
जमीन अवकास र पाङ्ग्रा
हामी आफैं वाहन अवकास मा वृद्धि कुरा भने, त्यसपछि यो त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन्। डेढ सेन्टिमिटर, मानक टायर vysokoradialnye कारखाना प्रतिस्थापन गर्न पर्याप्त दूरी मा मिसिन उचाल्न। उदाहरणका लागि, टायर 195 / 65R14 195 / 70R14 गर्न। जमीन अवकास यसरी मात्र अलिकति albeit, बढ्छ। तपाईं अझ कट्टरपंथी गर्न र कार पाङ्ग्रा R15 मा स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। यस मामला मा, अवकास "रेनो लोगान" एकदम वृद्धि भएको छ, तर पाङ्ग्रा arches को परिक्रमा छोएर, दल्नु, र अन्य सम्बन्धित घटना बिना ठूलो पाङ्ग्रा अनुमति यदि यो सम्भव छ। त्यसैले, तपाईं चौडाई मा पनि पाङ्ग्रा चयन गर्न आवश्यक छ। यो पनि नयाँ पाङ्ग्रा कट्टर कसरी खोल्दै गर्दा आला मा फिट हेर्नुपर्छ। यसबाहेक, हामी तपाईंलाई स्थापना गर्दा R15 पाङ्ग्रा भएको गति नाप्ने यन्त्र मा अपरिहार्य त्रुटिहरू छन् कि मनमा पर्छ।
विनिर्देशों "रेनो लोगान", एक अवकास वृद्धि र तपाईंले केही परिवर्तन गर्न अनुमति आवश्यक छ। माथिको कार जुटाउने क्रममा, जमीन अवकास वृद्धि गर्न रचनात्मक तरिका प्रयोग गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई को एक तथाकथित spacers को दराज वसन्त सीट को स्थापना छ। यो उत्पादन constructively सरल दोहराए रेडियल आकृति रैक एल्यूमीनियम को गरे। माउन्ट बोल्ट को एक सेट संलग्न spacers द्वारा। यो spacer उचाइ 20-25 मिमी, नयाँ पाङ्ग्रा संग मिलेर छ जो वाहन स्तर मा एक पर्याप्त वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। एक spacer स्थापना गर्न, यो अलिकति, कार ज्याक को सामने जुटाउने केन्द्रीय नट loosen र तनाव पानीका मुहानहरू पुल आवश्यक छ। कि पछि, अडान फुकाल्नु र यसको बन्धन को नियमित बोल्ट दस्तक गर्न। त्यसपछि नयाँ अब स्क्रू मा ड्राइव र spacer स्थापना गर्नुहोस्। को अवकास को फलस्वरूप "रेनो लोगान" 25 मिमी rises। को रियर भाग त्यसैगरि उठाएर छ तर spacer रबर प्रयोग गरिएको छ। निस्सन्देह, तपाईंले यी वस्तुहरू सम्मिलित अघि, तिनीहरूले सही छनौट गर्न आवश्यक छ। बिक्री मा विभिन्न सामाग्री बनेको विभिन्न आकार को spacers एक सेट छ। यो नयाँ भागहरु र सीट को मानकहरु साथ पूर्ण अनुपालन पालन गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
अवकास र पालैपालो
अक्सर अवकास कारण ट्रंक र उच्च स्थिर लोड को भित्री कारण हो जो पानीका मुहानहरू को प्राकृतिक दबाव मूल्यह्रास, गर्न घट्छ। यस मामला मा नयाँ संग पानीका मुहानहरू प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक छ। यो अवस्था शोषण र पुरानो पानीका मुहानहरू प्रबलित, माल मानक, अधिक वाहन प्रयोग को अवस्था संग लाइन मा हुने विस्थापन गर्न सम्भव छ। आत्म वृद्धि अवकास "रेनो लोगान" एउटा सानो दायरामा, 15-30 MM, गति नाप्ने यन्त्र त्रुटिहरू लागि बाहेक, कुनै पनि नकारात्मक परिणाम entail छैन।
तथापि, 30 वा बढी मिमी को अवकास मा वृद्धि संग, तपाईं यो मिसिन व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न तयार हुनुपर्छ। गुरुत्वाकर्षण को केन्द्र भुक्तानी सर्तहरू भन्दा उच्च भएको छ र सम्पूर्ण चेसिस को ब्यालेन्स विचलित केही डिग्री पहिले देखि नै छ हुनाले यसलाई खतरनाक हुन सक्छ रूपमा, तीव्र पालैपालो र bends जोगिन छ। को अवकास "रेनो लोगान" वृद्धि अघि सम्भावित जमीन अवकास को अधिकतम मान निर्धारण गर्न, र मात्र त काम गर्न सुरु आवश्यक छ।
F650 फोर्ड: विनिर्देशों र कार को विवरण
"LADA Largus क्रस": मालिकको, सबै बेफाइदा, फोटो को समीक्षा
S63 मोटर - विशेष र अद्वितीय
UAZ पैट्रियट अपडेट गरियो। यो मूल्य खरीद छ?
वैश्वीकरण के हो र यो नै प्रकट कसरी
कसरी आफ्नो हात संग कंगन रिबन बुनाई गर्न
गाढा र सेतो ग्लेज: व्यञ्जनहरु
रेस्टुरेन्ट Surgut: समीक्षा, आगंतुकों को समीक्षा
मिन्स्क, hardboard मा टुकडे टुकडे chipboard र MDF - कसरी रूख देखि निर्माण सामाग्री को विभिन्न प्रकार छनौट गर्ने?
अमूल्यहरू र तालमेलहरू, तामाङहरू र तिनीहरूको अर्थ। शौचालय र तालम्यानहरूको प्रतीकहरू के मतलब छ?